Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ)
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Haloperidolကို စိတ်ရောဂါ (ဥပမာ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါ) များကို ကုသရန် အသုံပြုပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ သင့်ကို ကြောက်ရွံ့မှုများ လျော့ပါးစေခြင်း ၊ပိုမို ကြည်လင်စွာ တွေးတောနိုင်စေခြင်း အားဖြင့် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင် နိုင်စေပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်း သေကြောင်းကြံခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ စိတ်တိုခြင်းနဲ့ အခြားသူများကို ထိခိုက်နာကျင်စေသော ဆန္ဒများအားလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။
Haloperidol ကို Tourette’s ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ စကားလုံးအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အသံအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေါက်ကွဲလွယ်မှုများအတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ Haloperidol ကို အခြားဆေးများဖြင့်ကုသ၍ မပျောက်ကင်းသော အငြိမ်မနေဘဲ အလွန်လှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
စိတ်ရောဂါကု ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်ထဲမှာ သဘာဝအလျောက် ထွက်ရှိတဲ့ ပစ္စည်း (neurotransmiitters) တွေကို ထိန်းညှိပေးဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။
အခြားအသုံးဝင်ပုံများ။ ။ ဒီကဏ္ဍမှာတော့ ဆေးရဲ့အသုံးပြုပုံတွေမှာ ဖေါ်ပြမထားသော်လည်းပဲ သင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူက ပေးကောင်းပေးနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကို ဖေါ်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေများအတွက် အသုံးပြုလိုတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်မှ ညွှန်ကြားမှသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Haloperidol ကို တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးရုံတက်နေတဲ့ စိတ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီဆေးကို ကင်ဆာရောဂါ ကုသမှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပျို့အန်ခြင်းကို ကုသဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဖို့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Haloperidol ကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အစာနဲ့ (သို့) အစာနဲ့မဟုတ်ပဲ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က Haloperidol ကို အရည်ပုံစံနဲ့ သောက်သုံးခိုင်းမယ်ဆိုရင် ဆေးပမာဏတိုင်းတာတဲ့ အစက်ချ ဖန်ပြွန်ကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းအစက်ချ ဖန်ပြွှန်မရှိဘူးဆိုရင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို ဆေးပမာဏတိုင်းရန် ဆေးထိုးပြွှန်အား တောင်းဆိုပါ။
ဆေးပမာဏဟာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ ဆေးကို တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Haloperidol ကို အကောင်းဆုံး ဆေးစွမ်းရရှိရန် ပုံမှန်အသုံးပြုပါ။ မမေ့လျော့ရန်အတွက် နေ့စဉ် အချိန်မှန်သောက်သုံးပါ။
ဆရာဝန်နဲ့ မတိုင်ပင်ပဲ ဆေးသောက်သုံးမှု မရပ်တန့်သင့်ပါဘူး။ တချို့ရောဂါတွေဟာ ဆေးရပ်လိုက်ရင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့သင့်ပါတယ်။
သင့်ရောဂါ လက္ခဏာတွေ မသက်သာဘူးဆိုရင် (သို့) ပိုဆိုးလာတယ် ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Haloperidolကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Haloperidol ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Haloperidol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Haloperidol ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Haloperidol (သို့) အခြားဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်အားကြိုတင် ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန် ညွှန်ကြားပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ သောက်သုံးနေသောဆေးများ၊ ဗီတာမင်များ၊ အာဟာရဆိုင်ရာ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ဆေးဘက်ဝင် အပင်များမှ ရရှိသော အရာများအား သောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားပြောပြ သင့်ပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါဆေးများ သောက်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လဲ ပြောပြဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
sparfloxacin (Zagam) ၊
စိတ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓါတ်ကျမှု၊ ဝမ်းဗိုက်ရောဂါ၊ စိတ်ရောဂါ၊ ကားမူးသောရောဂါများအတွက် သောက်သော Parkinson’s disease, တက်ခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်းနဲ့ ဆီးပြဿနာများအတွက်သောက်နေရသော ဆေးများ
သင့်ဆရာဝန်မှ ဆေးပမာဏများအား ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလဲ သေချာစွာ စောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
သင့်ထံမှာ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ရှိဖူးတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်အား သေချာစွာပြောပြသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သင့်အား ဆေးသောက်သင့် မသောက်သင့် ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
သင် (သို့) သင့်မိသားစုထဲမှာ prolongedQT syndrome လို့ခေါ်တဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ ထိုရောဂါဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နှလုံးခုန်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီးတော့ သတိလစ်ခြင်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းအထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ရင်သားကင်ဆာ၊ Bipolar disorder (စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနဲ့ စိတ်ကြွခြင်း တစ်လှည့်စီဖြစ်ခြင်း)၊ citrullinemia (သွေးသွင်း အမိုးနီးယားဓါတ်များခြင်းကိုဖြစ်စေသောအခြေအနေ)၊ဦးနှောက်လျှပ်စစ်လှိုင်းများစစ်ဆေးသော EEG တွင်မူမမှန်မှုများတွေ့ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ သွေးထဲတွင်ကယ်စီယမ် နဲ့ မန်ဂနိဆီယမ် နည်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံး (သို့) သိုင်းရွိုက်ရောဂါများရှိမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်ဆေးကို ရပ်တန့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဆေးကြောင့် အိပ်ငိုက်စေတာတွေ၊ သင့်တွေးခေါ်ပုံနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို သက်ရောက်မှု ရှိစေနိုင်တာတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ သင့်ပေါ်ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိမချင်း ကား (သို့) စက်ကိရိယာတွေနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဆေးသောက်နေစဉ်အတွင်း အရက်ကို ဘယ်လို သောက်ရမလဲဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ အရာက်သောက်ခြင်းဟာ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
သင့်မှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်လရင့်နေတာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိတာ၊ (သို့) နို့တိုက်မိခင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။ ဆေးသောက်နေလျက် ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားပါ။ ကိုယ်ဝန်လရင့်ပိုင်းမှာ ဆေးသောက်မိတယ်ဆိုရင် Haloperidol ဟာ မွေးကင်းစ ကလေးတွေမှာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
သင် ခွဲစိတ်စရာ (သွား ခွဲစိတ်ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်) ရှိရင် သင့် ဆရာဝန် (သို့) သွားဆရာဝန်ကို ဆေးသောက်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါ။
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမှာ ခေါင်းမူးခြင်း၊ ဆီးသွားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်မှုများခြင်းနဲ့ ဆေးထိုးထားတဲ့ နေရာမှာ နာကျင်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ထိုဆိုးကျိုးတွေ ဆက်လက်ရှိနေမယ် (သို့) ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အကြောင်းကြားပါ။
ကြွက်သား တဆတ်ဆတ်တုန်ခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်း၊ တုန်ယင်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ မျက်နှာကြွက်သားတွေတောင့်တင်းနေခြင်း၊ သွားရည်ကျခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ဒီ လက္ခဏာတွေ သက်သာဖို့အတွက် အခြားဆေးတွေ ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရှားပါးပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဆက်တိုက်ပျို့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း၊ မျက်လုံး (သို့) အသားဝါခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (အဖျားတက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း) တွေရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပြပါ။ ထို့အတူ နှလုံးခုန်နှေးခြင်း၊ ခေါင်းအလွန်မူးခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်းတွေရှိရင်လည်း ဆရာဝန်ကို အမြန်ပြောပြပါ။
ဆေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုဟာ ရှားပေမယ့် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။ ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်မှာ အနီကွက်ပေါ်၊ ယားယံ၊ ရောင်ရမ်း၊ ခေါင်းမူး၊ အသက်ရှူရ ခက်ခဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Haloperidol ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Lithum ဟာလည်း မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ အားပြတ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းလွယ်ခြင်း၊ ဇဝေဇဝါဖြစ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြွက်သား လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဦးနှောက်ထိခိုက်မိခြင်း များ အချို့လူနာများမှာ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ Lithium နဲ့ Haloperidol ပေါင်းသုံးလို့ အထက်ပါ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပွားခြင်း ဟုတ်မဟုတ် မသိရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Tramadol ကြောင့် တက်ခြင်း ပိုမို ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
Benztropine နဲ့ carbamazepine ဆေးတွေဟာလဲ Haloperidol ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပြီး သူ့ရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
မှိုဆေးတွေဖြစ်တဲ့ ketoconazole နဲ့ itraconazole ဟာလည်း haloperidol ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
Rifampicin ကတော့ ဆေးစွမ်းထက်မှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
သွေးကျဲဆေး၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့ sodium oxybate ဟာလည်း haloperidol ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Haloperidolက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Haloperidol ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
ပြင်းထန်သော နှလုံး (သို့) သွေးကြော ရောဂါများ
သွေးထဲတွင် prolactin ဟော်မုန်း များခြင်း
သွေးအတွင်း မန်ဂနိဆီယမ် နည်းခြင်း
သိုင်းရွိုက်အဆိပ်တက်ရောဂါ (Thyrotoxicosis)တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
03 to 0.15 mg/kg ကို အကြောဆေး 30 မိနစ်ခြားတစ်ခါ6နာရီထိ (ဆေး 2mg မှ 10mg ထိ)
3 to 25 mg/hour ကို စက်ဖြင့်တောက်လျှောက်အကြောဆေးလွှတ်ခြင်းကို အသက်ရှူစက်တင်ထားရသောလူနာ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်လျှင်သုံးသည်။
Dementia မေ့လွယ်သော ရောဂါအတွက်
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5 mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ် စားဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်
ဆက်လက်သောက်ရန်ဆေးပမာဏ -0.5mg မှ3mg ထိ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် စားဆေး အဖြစ်အသုံးပြုသည်
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5 mg မှ 5mg ထိ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ် စားဆေးအဖြစ်အသုံးပြုသည်
ဆက်လက်သောက်ရန်ဆေးပမာဏ-1 to 30 mg/day တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ်ခွဲ၍ သောက်သုံးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးမတိုးသောဆိုးရွားသော လူနာများတွင် 100mg ကျော်ထိ ဆေးကို တိုးပေးရတာမျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသို့များပြားသောဆေးပမာဏကို ကြာရှည်စွာသောက်သုံးခြင်းသည် အန ္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
2 to5mg အသားဆေး (သို့) အကြောဆေး ။4နာရီ တစ်ကြိမ် (သို့) 8 နာရီတစ်ကြိမ် ထပ်ပေးနိုင်သည်။ 8mg မှ 10 mg ထိ အကြောဆေးပေးနိုင်သည်။ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်နေသော လူနာအတွက် တစ်နာရီခြားတစ်ကြိမ် ထိုးဆေး လိုကောင်းလိုနိုင်မည်။
သောက်ဆေး – 1mg မှ5mg ထိ 4နာရီခြားတစ်ကြိမ် (သို့) 6နာရီခြားတစ်ကြိမ် စားဆေး
1mg မှ 5mg ထိ အသားဆေး (သို့) အကြောဆေး 4နာရီခြားတစ်ကြိမ် (သို့) 6နာရီခြားတစ်ကြိမ် လိုအပ်သလို သုံးနိုင်သည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5 မှ5mgထိ တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ခွဲ၍ သောက်နိုင်သည်။
ဆက်လက်သောက်ရန်ဆေးပမာဏ -: 1 to 30 mg/day တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ခွဲ၍ သောက်နိုင်သည်။ နေ့စဉ်ပမာဏ 100 mg ထိသောက်သုံးနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးမတိုးသောဆိုးရွားသော လူနာများတွင် 100mg ကျော်ထိ ဆေးကို တိုးပေးရတာမျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသို့များပြားသောဆေးပမာဏကို ကြာရှည်စွာသောက်သုံးခြင်းသည် အန ္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
2mg မှ 5mg ထိ အသားဆေး (သို့) အကြောဆေး ကို 4နာရီခြားတစ်ကြိမ် (သို့) 8 နာရီခြားတစ်ကြိမ် လိုအပ်သလို သုံးနိုင်သည်။ အသားဆေးကို 8mg မှ 10mg ထိပေးနိုင်သည်။ ပြင်းထန်စွာ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်နေသော လူနာများသည် တစ်နာရီခြားတစ်ကြိမ် ထိုးဆေးထိုးရနိုင်သည်။
ကနဦးဆေးပမာဏ – ခါတိုင်း နေ့စဉ်သောက်နေရသောဆေးပမာဏ၏ ၁၀ ဆ မှ ၁၅ ကို အသားဆေးအနေဖြင့် သုံးလေးပတ်ခြားတစ်ခါထိုးရသည်။ ကနဦးဆေးပမာဏသည် 100mg ထက်မပိုရ။ အကြောဆေးမထိုးရ။
Tourette’s syndrome အကြောဆွဲအာရုံကြောရောဂါတစ်မျိုးအတွက်
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5 မှ2mgထိ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ထိ စားဆေးသောက်နိုင်သည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်ဆေးပမာဏ – ဆိုးရွား၍ဆေးမတိုးသောအခြေအနေများအတွက် ၅ ရက်၊ ၇ ရက်တစ်ကြိမ် ဆေးပမာဏ 3mg မှ 5mgထိ တိုးသွားနိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
၂ နှစ် နှင့်အောက် (သို့) ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ်အောက် – မသုံးသင့်ပါ။
၃ နှစ် မှ ၁၂ နှစ် အတွင်း ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ် မှ ၄၀ ကီလိုဂရမ်အတွင်း –
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5mg/day နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ် ခွဲ၍ သောက်နိုင်သည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်ပမာဏ – ၅ ရက်မှ ၇ ရက်တစ်ကြိမ် နေ့စဉ်ဆေးပမာဏကို 0.25 to 0.5 mg ထိတိုးနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 0.05 မှ 0.15 mg/kg/day အတွင်း တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ခွဲ၍ သောက်ရသည်။ ဆေးပမာဏ ကို6mg/day ထပ်ပိုပေးသော်လည်း ရောဂါဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးမတိုးတက်တော့ပါ။
၁၃ နှစ် မှ ၁၈ နှစ် ထိ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ် အထက်
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5mg မှ 5mg တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ် သောက်သုံးနိုင်သည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်ပမာဏ – 1 to 30mg/day နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်ခွဲ၍သောက်သုံးနိုင်သည်။ နေ့စဉ် 100mg ထိသုံးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးမတိုးသောဆိုးရွားသော လူနာများတွင် 100mg ကျော်ထိ ဆေးကို တိုးပေးရတာမျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ထိုသို့များပြားသောဆေးပမာဏကို ကြာရှည်စွာသောက်သုံးခြင်းသည် အန ္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။
၅နှစ်အောက် – မသုံးသင့်ပါ။
၆ နှစ် နှင့် အထက် – 1mg မှ 3mg အသားဆေးကို ၄နာရီခြားတစ်ခါ ၈နာရီခြားတစ်ခါ လိုအပ်သလို သုံးနိုင်သည်။ အများဆုံးပမာဏမှာ 0.15mg/kg/day ဖြစ်သည်။ သက်သာသွားလျှင်သွားချင်း သောက်ဆေးကိုပြောင်းပေးသင့်ပါသည်း
၁၃ နှစ် မှ ၁၈ နှစ် – 2mg မှ 5mg အသားဆေးကို ၄နာရီခြားတစ်ခါ ၈နာရီခြားတစ်ခါ လိုအပ်သလို သုံးနိုင်သည
၁၇ နှစ် နဲ့အောက် – ဆေးစိတ်ချရမှုနဲ့အာနိသင်များအပေါ် လုံလောက်သော စမ်းသပ်မှုများမရှိပါ။
Tourette’s syndrome ရောဂါသည် ကလေးများအတွက်
၂ နှစ် နဲ့အောက် (သို့) ကိုယ်အလေးချိန်၁၅ ကီလိုဂရမ်အောက် – မသုံးသင့်ပါ။
၃ နှစ် မှ ၁၂ နှစ် ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ် မှ ၄၀ ကီလိုဂရမ်
ကနဦးဆေးပမာဏ – 0.5mg/day တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်မှ သုံးကြိမ်ခွဲ ၍ စားဆေးအဖြစ်သောက်နိုင်သည်။
ဆက်လက်သောက်သုံးရန်ဆေးပမာဏ – ဆေးပမာဏကို အပတ်စဉ် 0.25 to 0.5 mg မှ 0.05 to 0.075 mg/kg/day ထိတိုးနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏ ကို6mg/day ထပ်ပိုပေးသော်လည်း ရောဂါဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးမတိုးတက်တော့ပါ။
၁၃ နှစ် မှ ၁၈ နှစ် ၊ကိုယ်အလေးချိန် ၄၀ ကီလိုဂရမ်အထက် – 1mg မှ2mg ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် မှ သုံးကြိမ် စားဆေးအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
Haloperidol (ဟေလိုပယ်ရီဒေါ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Haloperidol ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အနှစ် (သောက်ရန်) (lactate အဖြစ်) –2mg/mL (5 mL, 15 mL, 120 mL)
အရည် (အသားဆေး) (decanoate အဖြစ်) – 50 mg/mL, 100 mg/mL
အရည် (ထိုးဆေး) (lactate အဖြစ်) –5mg/mL
ဆေးပြား (သောက်ရန်) – 0.5 mg, 1 mg,2mg,5mg, 10 mg, 20 mg
Haloperidol ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။